Fitaovana Belay Auto ho an'ny fiakarana sy fialamboly | Rafitra fiakarana fiaviana tonga lafatra
Soraty ny fitaovanao
Hisoratra anarana amin'ny fitaovana
Mitadiava mpivarotra iray
Momba ny Auto Belays
Serivisy sy fanoratana indray
Drafitra fanodinana DUPLEX EXCLUSIVE
Famerenam-bidy miverimberina natao ho an'ny fahamendrehana sy ny faharetana
Mitadiava mpivarotra indray
PD® Athlete Sean McColl mizara ny tantarany Olaimpika
Voamarina amin'ny Max
Fanatrarana ny fenitra avo indrindra an'ny fanandramana sy fanamarinana
Mifanerasera amin'ny mpiara-miombon'antoka vaovao
Ny Descent Auto Belays tonga lafatra dia vita tanana ao Etazonia ary voamarina amin'ny fenitra avo indrindra eto an-tany. Manasongadina tranga ivelany misy alimo sy vy tsy miovaova hiarovana ireo singa anatiny mitafy avo lenta. Ny fanamboarana maivana sy matevina, azo itokisana ary ambany ny vidin'ny fananana dia vitsivitsy monja amin'ireo antony mahatonga ny PD® ho fiara fitateram-bahoaka any amin'ny gym, toby, sekoly ary oniversite, amin'ny làlana misakana ny ninja, ary amin'ny ivom-pialam-pianakaviana. Voasedra sy voamarina amin'ny 10x EN 341: 2011 Kilasy A., maneho ny takiana fanamarinana feno indrindra ho an'ny fitaovana Belay fiara fialamboly.
MAHARITRA & azo atokisana
Notsapaina tamin'ny 10x EN 341: 2011 Kilasy A ary misy aliminioma maharitra sy vy tsy misy fangarony any ivelany miaraka amin'ireo singa mitafy avo lenta ao anatiny.
Famerenana miverimberina mampiseho ny Doplex Spring Design ™ an'ny PD® natao ho an'ny fahamendrehana sy ny faharetana.
Mora ny mametaka, mihetsika ary mitantana avo indrindra ary tsy lafo ny mandefa azy amin'ny serivisy sy ny fanamafisana.
VAROTRA NY FANANAN-TENA ambany
Ny vidin'ny fidirana, ny sarany fanamafisana isan-taona ambany, tsy misy sarany serivisy miafina ary singa maharitra maharitra dia midika fitsitsiana vola mandritra ny androm-piainan'ny tompona.
Nosedraina ny fifaninanana
Nampiasain'ny ekipa sy atleta ambony eran-tany ary ny belay fiara voalohany nampiasaina tamin'ny fifaninanana amboara eran-tany, nanjary fandrosoana lehibe teo amin'ny fiarovana sy ny rariny ny fifaninanana.
Fampiasana eto an-trano sy any ivelany
Ireo singa tsy mahazaka harafesina sy trano mihidy ho an'ny fampisehoana miavaka ao anaty sy any ivelany.
Fananganana ny tsara indrindra fiara belay
Fidio ny zava-bitanao
Ny mpitarika ny vidiny amin'ny fiara fitateram-bahoaka avo lenta sy avo lenta.
Miverina amin'ny salan'isa 2ft (61cm) isan-tsegondra, ka mahatonga azy io ho safidy mety amin'ny fiakarana ankapobeny, ny làlam-panafana, ny fiakaran'ny ankizy, ary ny fiakarana hetsika.
Manasongadina ny Duplex Spring Design ™ natokana ho an'ny fahamendrehana sy ny faharetana.
Nasiana tombo-kase tanteraka ho an'ny fampiasana anatiny sy ivelany.
Ny belay fiara miverina haingana dia mametra ny fenitra amin'ny kalitao sy ny fahombiazany.
Raha miverina amin'ny haingam-pandeha 15ft (4.6m) isan-tsegondra, Speed ​​Drive ™ dia mety amin'ny fiakarana haingam-pandeha sy ny fifaninanana, ny zotra mavitrika, ny fiofanana elanelam-potoana ary ny lalana fitetezam-batana.
Ny Belay ofisialy Auto an'ny IFSC World Cup Climbing ary manasongadina ny Duplex Spring Design ™ manokana.
Safidio ny Lanyard anao
PD® Auto Belays dia manolotra halavan'ny lanyard telo natao hanatsarana ny zava-bitan'ny auto belay mifototra amin'ny fiakarana avo. Safidio foana ny lanyard izay mifanandrify akaiky indrindra amin'ny haavon'ny fiakarana izay mitovy amin'ny na lava ny halavany.
Ny haavon'ny havoana eo anelanelan'ny 18ft sy 28.5ft (5.5m sy 8.7m)
Ny haavon'ny havoana eo anelanelan'ny 26ft sy 40.5ft (8m sy 12.3m)
Ny haavon'ny havoana eo anelanelan'ny 34ft sy 53.5ft (10.4m sy 16.3m)
Safidio ny fomba hifandraisanao
Firaka vy, carabiner mihidy 3-dingana miaraka amina fihodinam-bola tafiditra
Miady amin'ny korontana
Aluminium anodized, carabiner mihidy 3-dingana miaraka amina fihodinana
Fifaninanana sy filaminana
Roa, 3-dingana carabiners mihidy-mihidy misy taolana alika nozairina sy swivel tafiditra
Loza feno zaitra nozairina azo ampiasaina amin'ny karazam-pifandraisana alàlana
Kalitaon'ny kintana dimy
Tian'ireo atleta, tompona orinasa ary mpankafy fiakarana
Ekipa mpanohana tsara kokoa ny vokatra lehibe kokoa
Vokatra tsara ekipa mpanohana tsara kokoa aza "Ny belay fiara fitaterana tonga lafatra dia manome fahafaham-po ny filako ary ny mpiasa Arial Adventure dia nanampy sy nampahafantatra tsara isaky ny nila ny fanohanan'ny mpanjifa aho." Noa B. tamin'ny 19 Aog 2020
Noa B. tamin'ny 19 Aogositra 2020
Taranaka tonga lafatra dia hahatonga ny razanao ho lavorary
Misy Autobelay avo lenta avo indrindra. Manoro hevitra fatratra.
Mike L. tamin'ny 9 Mey 2019
Ity no auto belay amin'ny ho avy. Tianay ny vokatra.
Kellen D. tamin'ny 19 Jona 2019
Fampiasana tsara ho an'ny gym fampiakarana rehetra!
Fitaovana Wonderfull sy fampiasana milamina.
Maurice D. amin'ny 6 Mey 2020
Ity belay fiara ity dia natao ho an'ny rindrina 22 metatra ary miasa tsara. Tsy mila olona handà ahy intsony! Mahatsiaro ho azo antoka sy azo itokisana aho ary mora napetraka ho an'ny tanjoko. Nividy iray faha-2 ho an'ny faritra hafa amin'ny rindriko aho!
Steve W. tamin'ny 28 Janoary, 2020
Ampianaro ny programa fitantanana fiara fitaterana fiara
Product fisoratana anarana dia ampahany manan-danja amin'ny fitantanana fiara belay ary mametraka rakitsoratra voalohany sy marina ampiasaina mandritra ny androm-piainan'ny fitaovana. Aoka ianao no ho voalohany hahazo beta mitsikera momba ny fanavaozana ny vokatra, ny vaovao sy ny zava-mitranga, ny bulletin technique ary ny tolotra manokana.
Midira amin'ny boky torolàlana momba ny vokatra anglisy sy vahiny ary boky fampianarana. Sintomy ny antontan-taratasim-baovao farany indrindra momba ny lasely maodely 220 sy 230, fitsidihana duplex spring ™ ary boky fampianarana fanoloana lanyard, torolàlana momba ny fanadiovana sy famonoana otrikaretina ary maro hafa.
Hijery Boky Torolàlana
Araraoty tsara ny programa fitantanana PD® misy anao amin'ny fampahalalana fohy sy lalina momba ny fametrahana, fikarakarana ary ny fiasa. Mikaroha paikady famahana olana iraisana, vakio ny fepetra takiana amin'ny mpanara-maso, ary tadiavo ny torolàlana momba ny fitantanana fiara fitateram-bahoaka.
EN Standards dia nametraka ny bara azo antoka ho an'ny fiarovana ny vokatra, ny fahamendrehana ary ny kalitao. Ny fitsapana fiara fitaterana tonga lafatra dia nosedraina sy voamarina amin'ny fenitra avo lenta indrindra ho an'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny 10x EN 341: 2011 Kilasy A. Jereo sy ampidino ny fanamarihana farany momba ny fanamarinana sy ny fanamarinana momba ny fanadinana.
Torolàlana momba ny vokatra nidina tonga lafatra
Fanamarihana momba ny vokatra
Aza hadino ny daty
© 2021 Rafitra fiakarana tonga lafatra. Zo rehetra voatokana.